‘‘हेलो ! तपाइँ’’ - Purba Nepal
‘‘हेलो ! तपाइँ’’
on: In: पुर्बेली तर्क, साहित्य
सबैलाई मपाईत्वको उन्माद छ । राजा रङ्क सबैमा रहेको मपाईत्वले उसलाई पिर्नसम्म पिरेको छ । सायद राम्रो ‘म’ त्यसैले भनिएको होला । व्यञ्जन वर्णमा लाको पच्च्सिौं अक्षरले विश्वको मानवलाई आफ्नो कव्जामा पारेको हुँदा हाम्रो विवेकवाटिकामा अहं तत्वको विजारोपण भएको छ । यो अहं तत्व नै रक्त विज होला । थोपा थोपा रक्तबाट रक्तविज राक्षशको उत्पत्ती भएको प्रसङ्ग सप्तशति चण्डीमा उल्लेख भएको र त्यसको अन्त्य गर्ने शक्ति साक्षात भगवतीमा मात्र रहेको प्रसङ्गले पुष्टि गरेको छ । “रक्तविज बधे देवी चक्र मुणु बिनाशिनी” आज हाम्रो समाजमा रक्त विजको ठूलो प्रभाव छ । अर्थतन्त्रमा पल्किएका कारण यसले सबै मानिसको मानविय गुणमा स्वभावैले आफ्नो कव्जा जमाएको छ । पद, प्रतिष्ठा र शक्ति दुरुपयोग गरेर जो कोही आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न उद्यत छ । सत्ता प्राप्ति गर्ने खेलमा रक्त विज साँच्चै अग्रपङ्त्तिमा देखियो ।
स्वाभिमानलाई कौडीको मोलमा बन्धक राखेका कैयौं उदाहरण छन् हाम्रो समाजमा । लागुपदार्थको ओसार पसार, मानव तस्करी र बेचबिखन, सुनकाण्ड, चेलीबेटी बेचबिखन, यी सब धन्दाको पछि कैयौं खाले रक्त विज निर्लिप्त भएर लागेका छन् । आफ्नो ओहोदा, कर्तव्य, मान–मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा, सबै रक्तविजकै पछिपछि लागि रहेको छ । “द पाइप पाइपर अफ हेमलिन” नामक कवितामा एउटा बाँसुरी बादकको बाँसुरीको धुन बजेपछि काकामुसा मामामुसा मुसीहरु लावालस्कर लागेर हेमलिन नदीमा पुगे जस्तै हाम्रा ठूला बडाहरु तस्करी तन्त्रका पछि पछि खुब दौडी रहेका छन् । यो सबै राम्रो ’म’ कै करामत हो । इज्जत मान मनितोलाई पैसासंग साट्नेहरु अनेक खाले दर्शन छाँटेर सिङ्गो जनभावनामा गिर खेली रहेको छ । यसमा केवल गिर खेल्नेहरुमात्र दोषी रहेनन् । स्वविवेकलाई तिनका भाषण र आस्वाशनको बाँसुरी धुन पत्याई पत्याई पिछलग्गु बनेका थुप्रै मपाइँहरु पनि दोषी छन् ।
मपाइँहरुका पनि आफ्ना आफ्नै कित्ता हुंदा रहेछन् । आफ्ना आफ्ना कित्ताका ठेकेदारहरुको पछि मुसेताँती लागेर लागेर हिंड्नु पनि पो मज्जाको खेल रहेछ । मपाइँहरु छेपारे रङ्ग धारण गर्न खप्पिस छन् । छेपाराले कुन मौसममा कस्तो रङ्ग बदल्छ सर्ब साधारणलाई पत्तै हुँदो रहेनछ । यसैले सबै लठ्ठ परेर स्यालको हुइँयामा सरिक हुँदारहेछन् । मेची महाकालीको हुइँया चलेपछि कैयौं मानव मस्तिष्कमा अनौठो मनोविज्ञान भरिंदो रहेछ । त्यही मनोविज्ञानले शान्त तलाउमा पनि ठूलै तरङ्ग पैदा गर्दो रहेछ । हामी देख्दैछौ देश आज त्यही तरङ्गमा तरङ्गित भएको छ । खरायो र कछुवाको दौड प्रतियोगितामा कछुवाले विजय प्राप्ति गरेको मिथक केटाकेटीलाई कर्ममा निरन्तर लाग्न अभिप्रेरित गर्ने एकखाले उदाहरण हो । अहिले देश त्यस्तै दौडको आयोजनामा लागे जस्तो छ । सत्ता र शक्ति आफुबाट टाढा भएको आत्मरतिले केही दार्शनिकहरु बडो आतेसमा देखिए । सियोको नाथ्री खोज्नको हैरान भयो तिनीहरुलाई । धागो नउनी कुनै उध्रिएको कपडा टाल्नै नसकिने भएपछि सियोको टुप्पाले मात्रै काम काट्दो रहेनछ । यसैले अहिले सियोको नाथ्री पत्तो लगाउन केही गोताखोरहरु झ्वाम्मै पानीमा हाम फाल्दै देखिए । वडो दु ःखद छ तिनको यो अन्वेष्ण र प्रयास ।
प्रयास गर्नेले त गर्नै पर्यो नि । सियोको नाथ्री टाल्नेलाई त्यस्तै भएको होला । कसरी नाथ्री छलेर अगाडि बढ्ने । एक ठाँउ टाल्ने प्रयास गर्यो दश ठाँउ प्वाल पर्छ । त्यसै माथि प्राकृतिक प्रकोप खनिन्छ । कतै बाढी पहिरो, भूकम्प, आगजनी, माफिया तन्त्र, तस्करी, डनबाद बडो आपद छ तिनलाई पनि । यो राम्रो ’म’ को न्वारन गर्ने व्यक्ति को थियोरु बडो आपद छ । भाषामा यादृच्छिकता हुन्छ भनिन्छ । त्यसो भए यो राम्रो ’म’ लाई पनि राम्रो ’तँ’ भनेको भए त सहजै हुन्थ्यो किरु अरु राम्रो हुन लाग्यो भने राम्रो ’तँ’ भन्न अहिले जिब्रै लाग्दैन ।
यसैले यो समस्या विकराल भएर आएछ । राम्रो ’म’ हुने ढङ्ग र योजना नै दिमागमा नपलाएपछि समय जति लामो लगाएर तपस्या गर्दा पनि महादेव खुसी भएर बर्दान दिन आउँदा रहेनछन् । बरु तपस्यामा त मेनका, तिलोतमा, र उर्वसी पढाएर उल्टै आबुक पो लिंदा रहेछन् ती महादेवले पनि । हुन त महादेवलाई लखेट्नु परेको रु यो भस्माशुरको लखेटाइ पनि बडो अचम्मकै रहेछ । महादेवले लखेटिनु र विष्णुले छल गरेर बचाउनु परेको पौराणिक मिथक कथा जस्तै भएछ आजको मपाइँबाद ।
यो मपाइँबाद जति मौलायो त्यति सर्वसाधारणलाई आपद हुँदो रहेछ । अहिले मपाइँबाद धरापमा परेको छ । होस हराएका महादेवले आफ्नी पार्वती माग्दा तथास्तु भनेकै कारण भस्माशुरले शिवलाई ताकेछ । सत्ता र शक्ति आफ्नो हात लागेका बेला महादेवको नन्दी उग्राएकोझै उग्रनाएर अरुको कुनै वास्तै नगरेकै कारण उग्राएर बस्न नै लागोस भनेर जन अदालतले निर्णय दियो । अहिले ओठ तालु सुकाएर सुस्केरा हाल्नुको के अर्थ हुन्छ रु “मौका आउछ पर्खदैन त्यसमा चुक्ने महालठ्ठ हो” त्यस्तै भएको छ अहिले मपाइँहरुलाई तर यो त खुल्ला किताब हो चेतना हुने र इज्जत राख्न चाहनेका लागि, सत्ता र शक्तिमा उन्माद हुँदो रहेछ । उन्मादीमा मस्त भए अरु मपाइँहरुको पनि दुर्दशा त्यही हो । यहाँ त मनुवाहरु भोकै,नाङ्गै र अनिदैछन् । तिनको भोक तिर्खा र अनिदो अवस्थामा भरथेग हुने विश्वास दिलाउन अहिलेका तपाईहरु सचेत हुनुपर्यो नत्र मपाइ कै हालत हात लाग्ने छ ।
सबैमा चेतना भया